Xarunta Caddaaladda Bulshada ee Burlington waxay raadineysaa xirfadle dib-u-habeyn dhaqan celin ah!
Xiriirka Dhalinyarada iyo Qoyska
Qaybtan saacadaha ah ee deeq-lacageed la maal-galiyo (25 saacadood / usbuucii) boosku wuxuu lashaqeyn doonaa isku xirnaan dhow oo lala yeelanayo Dugsiga Degmada Burlington (BSD) iyo UP for Learning si loo carqaladeeyo iskuulka ilaa dhuumaha xabsiga iyadoo la dhimayo hakinta iyo ka saarida dhalinyarada midabka leh
Xiriiriyaha wuxuu adeegsan doonaa dhaqammada dib u soo celinta, muraayadaha muraayada lagu sheegay, iyo inuu iskaashi la sameeyo la-hawlgalayaal badan oo bulshada ah, si loo abuuro nidaam dhaqan ahaan looga jawaabo, wax ka qabashada hore. Diiradda mawqifka, marka hore, waxay noqon doontaa dugsiyada dhexe ee Burlington, waxayna qori doontaa oo tababar siin doontaa ardayda ka soo jeeda asalka kala duwan ee xiriirka dhisidda iyo ka jawaab celinta khilaafaadka.
Jagadani waxay ku dhisnaan doontaa shaqada BSD ee lixdii sano ee la soo dhaafay iyada oo ka shaqeyneysa sidii loo hirgelin lahaa dhaqammada dib u soo celinta heer degmo oo dhan. Tani waa deeq hal sano ah oo ay suurtagal tahay in la kordhiyo saddex, hal sano ah.
Booqo bogga HR ee magaalada si aad u dalbato.